IOS 14.7.1 uye iPadOS 14.7.1 Yakaburitswa Kugadzirisa Apple Tarisa Kuzarura Kanganiso | IPhone nhau
Apple yakakurumidza kugadzirisa iyo Apple Watch kuvhura bug. Izvo chete zvakatora vhiki kuburitsa nyowani IOS yekugadzirisa kugadzirisa dambudziko. Bravo.
Kana iwe ukagadzirisa yako iPhone ikozvino kune iyo nyowani vhezheni iyo yakangoburitswa awa rimwe chete rapfuura, iyo iOS 14.7.1, Iwe hauchazove nematambudziko kuvhura yako Apple Watch neiyo iPhone. Neshanduro yapfuura, 14.7, kuvhura uku kwainge kwamira kushanda.
Awa rapfuura Apple yakaburitsa vhezheni nyowani yeIOS 14.7.1 yeiyo iPhone uye iPadOS 14.7.1 yePads. Vhiki chete mushure mekunge iOS 14.7 yaburitswa. Iyo kambani yanga ichikurumidza kugadzirisa iyo yekuvhura kukanganisa iyo yaisanganisira iyi vhezheni.
iOS 14.7 yakaburitswa svondo rapfuura, ichiunza shanduko dzinozivikanwa kune vashandisi ve iPhone: MagSafe Battery Pack rutsigiro rwe iPhone 12, rutsigiro rwekubatanidza maakaundi eApple Card, ficha nyowani yekuchengetedza timer yevashandisi vePambaPod yeApple app, nezvimwe.
Dambudziko nderekuti mune ino gadziriso pakanga paine zvakare kukanganisa: mhando dze iPhone neTouch ID haikwanise kuvhura Apple Watch paired uchishandisa iyo "Vhura ne iPhone" basa. Iyo "bhaggi" yakakurumidza kuwanikwa nekambani, uye neyakagadziriswa yanhasi inogadziriswa.
iOS 14.7.1 uye iPadOS 14.7.1 inogadzirisa zvakare nyaya hombe ye ngozi yakawanikwa mazuva mashoma apfuura. Saka Apple inokurudzira kugadzirisa nekukurumidza sezvazvinogona.
Iyo yekuvandudza inoitwa senguva dzose, kuburikidza neOTA. Kana uine otomatiki, zvichaitwa manheru ano. Kana iwe uchida kuimanikidza, saka senguva dzose: Zvirongwa, Zvakajairika, Software Gadziriso, uye IOS 14.7.1 ichaonekwa.
Ini zvakare ndinokuyeuchidza iwe kuti kana iwe ukaona kuti kurodha pasi kweiyo yekuvandudza kunononoka, zvinokonzerwa nekudiwa kukuru kwe "vasingashiviriri" vasingakwanise kumirira. Zviite tapedza kudya, uye iwe uchaona kuti ichaenda nekukurumidza zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » IOS 14.7.1 uye iPadOS 14.7.1 Yakaburitswa Kugadzirisa Apple Tarisa Kuzarura Kanganiso
Ini ndinofungidzira kuti ine chekuita neichi chigadziriso kusvika 14.7.1, asi kana yaiswa pane yangu iphone uye pane yangu ipad, hapana kana maviri majaira anotengesa bhatiri rangu zvekare. handizive zvekuita
My ipad yakamira kushanda pandakaisa ino gadziriso….